Jereo izay ho hitanao amin'ny Oyambre Beach any Cantabria | Vaovao momba ny dia
Ao amin'ny fiarahamonina any Cantabria dia afaka mahita torapasika mahatalanjona isika ary ny tontolon'ny natiora, ka manasarotra ny fifidianana ny iray amin'izy ireo. Oyambre Beach dia raisina ho iray amin'ireo tsara tarehy indrindra ary izany no hiresahantsika azy sy ny tontolo iainana misy azy. Izy dia tora-pasika any amin'ny tanànan'i Valdáliga sy San Vicente de la Barquera.
La mahafinaritra morontsiraka Oyambre dia toerana tena tsara tarehy Miaraka amin'ny roa kilometatra ny halavany izay fitsidihana tena ilaina izany raha mijanona ao San Vicente de la Barquera izahay, toerana fizahan-tany tena tsara. Ao anatin'ny Valan-javaboary Oyambre no misy azy ary koa manan-danja lehibe izy io.
1 Ahoana ny fomba ahatongavana any amin'ny tora-pasika Oyambre
2 Valan-javaboary Oyambre
4 Faritra akaiky
Ahoana ny fomba ahatongavana any amin'ny tora-pasika Oyambre
Ity iray ity amoron-tsiraka mora hita ny morontsiraka satria akaikin'i Santander io. Raha tonga any Santander ianao dia afaka mitondra ny A-7 mankany Torrelavega ary avy eo ny A-8 mankany San Vicente de la Barquera. Rehefa tonga any amin'io tanàna io isika dia mila mandeha amin'ny làlana CA-236 izay mitondra antsika mivantana mankany amin'ny Oyambre Natural Park ary mankamin'ity morontsiraka mahafinaritra ity. Avy any Asturias dia afaka mandeha amin'ny lalana E-70 ihany koa isika ary avy eo ny A-8 mankany San Vicente de la Barquera. Mora ny mankany amin'ity tanàna ity amin'ny teboka maro satria ny làlambe no mamaky azy, ka mora ny mankany amoron-dranomasina.
Io morontsiraka no misy ao anaty vala voajanahary voaaro tsara. Ity zaridaina ity dia zaraina eo anelanelan'ny tanàna samihafa, Comillas, San Vicente de la Barquera, Udías, Valdáliga ary Val de San Vicente. Ity habakabaka ity dia valan-javaboary natoraly hatramin'ny 1988. Ity valan-javaboary ity dia misy ny lohasahan'ny reniranon'i San Vicente sy ny vavahady Rabia. Izy io dia tontolo iainana eo amin'ny morontsiraka izay ahitantsika dongom-pasika, ala sy loharano misy zavamaniry sy biby miavaka. Eto no ahitanao vorona anaty rano maro izay mipetraka ao amin'ilay faritra mandritra ny fifindra-monina.
Ity dia morontsiraka fasika volamena tsara misy onja vitsivitsy. Fantatsika fa ny morontsiraka any Cantabria dia misokatra sy misongadina noho ny fisian'ny onja, ka izany tokoa tonga lafatra ho an'ny fanatanjahan-tena toy ny Surf na Surf. Raha ny momba ny serivisy dia misy fiantsonan'ny fiara eo akaiky eo ary azo atao ihany koa ny mandeha any amin'ny fitateram-bahoaka, farafaharatsiny amin'ny vanim-potoana. Misy faritra fitobiana ary mandritra ny vanim-potoana dia afaka mahita bara amoron-dranomasina eo akaiky eo koa ianao hividianana zavatra hangatsiaka. Miaraka amoron-dranomasina malaza sy tsara tarehy dia antonony ny asany. Raha ny momba ny fianakaviana dia ilaina hatrany ny mitandrina amin'ny onja satria miankina amin'ny andro dia tsy tokony hasaina handro ny ankizy. Amin'ny vanim-potoana dia misy ihany koa ny serivisy mpiambina. Tokony hojerentsika ireo saina manofahofa satria milaza amintsika raha afaka mandro isika na mety hampidi-doza izany. Avela hisy fandroana saina maitso, amin'ny mavo dia mila mitandrina ianao ary amin'ny saina mena dia tsara kokoa ny tsy misasa. Etsy ankilany, misy ny fandrarana sasany tsy maintsy raisina, satria tsy avela eny amoron-dranomasina ny alika, ary tsy afaka milalao baolina na angady na manipy fako ianao.
Tena tsara tarehy ity morontsiraka ity nefa mamela antsika hahita faritra akaiky sasany hizaha fizahana ihany koa. Misy torapasika hafa izay eo akaiky eo, toa ny Morontsiraka El Cabo any San Vicente de la Barquera tokony ho roa kilometatra na morontsiraka Comillas any Comillas tokony ho efatra kilometatra.
Ity tanàna kely ity dia naorin'i Alfonso I tamin'ny taonjato faha-XNUMX ary teto no nanorenany ny tranobeny, manodidina izay hananganana ity tanàna ity. Toerana iray lalovantsika raha mankany Asturias isika ary io dia miorina amin'ny Camino de Santiago fanta-daza, noho izany dia maro ny fizahantany ao aminy. Ny iray amin'ireo zavatra hitantsika eto amin'ity tanàna ity dia ny Puente de la Maza tsara tarehy, tetezana vato tamin'ny taonjato faha-32 izay natsangana teo amin'ny tetezana hazo tranainy indrindra. Nisy tohana XNUMX izy ary misy angano milaza fa raha maniry ianao ary miampita ny tetezana mitazona ny fofonainao dia ho tanteraka ny faniriana.
Ny iray amin'ireo toerana hitantsika eto amin'ity tanàna ity dia ny Convent an'i San Luis, fananganana fomba Gothic ny didin'i Franciscan. Ny faritra taloha ao an-tanàna dia manome ohatra marobe momba ny maritrano taloha, toa ny Torre del Proboste, tilikambo taonjato faha-XNUMX izay miraikitra amin'ny rindrina taloha. Ny iray amin'ireo teboka mahaliana azy dia ny fiangonan'i Santa María de los Ángeles ao amin'ny faritry ny tanàna. Fiangonana tsara tarehy naorina hatramin'ny taonjato faha-XNUMX ary manome ohatra tsara amin'ny fomban'ny tendrombohitra Gothic. Tsara ny mahita ny atitany sy ny ivelany, satria izy io dia nambara ho toerana misy ny tombontsoa ara-kolontsaina.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » General » Morontsiraka Oyambre any Cantabria
Ireo toby 5 tsara indrindra any Catalonia